अब औषधी खाएर घटाउन सकिन्छ तौल, यस्तो छ तरिका - Khabar Break | Khabar Break
अब औषधी खाएर घटाउन सकिन्छ तौल, यस्तो छ तरिका
काठमाडौं, ११ भदौ । के शरीरको तौल बढेर तपाईलाई टेन्सन भइरहेको छ ? अनि तौल घटाउनका लागि तपाईले अपनाएका उपायहरु निकम्मा भए । अब चिन्ता नलिनुस् । अब औषधिको प्रयोगले तौल घटाउन सकिने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
वेलायतको न्यू इङ्ल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित एक अनुसन्धानले ‘लार्र्कािसरिन’ नामक औषधिको प्रयोगले मानिसले कुनै असरविना नै तौल घटाउन सकिने बताएको हो । जर्नलका अनुसार लोर्कासिरिन खान थालेपछि ४० महिनाभित्र मानिस ४ केजीसम्म घट्नेछन्। १२ हजार जनामा गरिएको अध्ययनमा साढे ३ वर्षको औषधि प्रयोगले उनीहरुको तौल ५ देखि १० प्रतिशतसमम घटेको पाइएको हो ।
हालका लागि यस लोर्कासिरिन औषधि अमेरिकामा मात्र पाइन्छ । दिनमा २ पटक लिइनुपर्ने चक्कीको प्रत्येक महिना २ सय २० देखि २ सय ९० अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने बताइएको छ । युरोपले भने यतिबेलासम्म यस औषधि बेचबिखनको लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छैन । मोटा मान्छेमा डायबेटिज, क्यान्सर र मुटुको समस्या हुने खतरा हुन्छ । यस दबाइको प्रयोगले सबै समस्या कुनै असर विना हट्ने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन्
कोरोना भाइरस स्वास्थ्य: कोभिड-१९ को फोक्सोमा दीर्घकालीन असर कस्तो
आज एकै पटक ३९६ स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास हुँदैं
जाडोमा रुघा खोकीले सतायो ? यस्ता छन् रूघा खोकी निको पार्ने सरल घरेलु उपाय